वीर हस्पिटलको ट्रमा सेन्टरबाट हाम फालेर अमेरिकी नागरिकद्वारा आत्महत्या ! के हो कारण ? — Sanchar Kendra
वीर हस्पिटलको ट्रमा सेन्टरबाट हाम फालेर अमेरिकी नागरिकद्वारा आत्महत्या ! के हो कारण ?
वीर हस्पिटलको ट्रमा सेन्टरबाट हामफालेर एक जना अमेरिकी नागरिकले आत्महत्या गरेका छन् । प्रहरीका अनुसार आत्महत्या गर्नेमा अमेरिकी नागरिक जोन छन् ।
यसअघि पनि उनले आत्महत्याको प्रयास गरेका थिए । उनी १६ चैतमा आफ्नै घाँटी काट्ने प्रयास गरेपछि हस्पिटल भर्ना भएका थिए । थप अनुसन्धान भइरहेको घटनास्थलमा पुगेका एक प्रहरी अधिकारीले बताए । उनले के कति कारणले आत्महत्या गरे भन्ने कारण केहि नखुलेको बताईएको छ ।